हाम्रो बारेमा | Beyin प्याकिंग | फूड बैग कारखाना
काजुओ बेयिन पेपर र प्लास्टिक प्याकिंग कं, लिमिटेड जसको पूर्ववर्ती शाओनग्सियान जुरेन पेपर एन्ड प्लास्टिक प्याकिंग कं, लिमिटेड हो, सन् १ 1998 1998 in मा शुरुमा स्थापना भएको हो। हामीसँग त्यतिबेला आफ्नै उत्पादन लाइन थिएन, केवल केहि व्यापार गर्न सक्दछौं। समय बित्दै जाँदा, हामीसँग हाम्रो कारखाना छैन भने गुणवत्ता र उत्पादन समयको ग्यारेन्टी गर्न यो धेरै गाह्रो छ। त्यसोभए हामीले आफ्नै लाइनहरू बनाउने निर्णय ग .्यौं। हामीले धेरै चोटि प्रयास गर्यौं र असफल भयौं, हामीले धेरै समस्याहरू भेट्यौं, जब हामी प्रिन्ट गर्छौं, रंगहरू सधैं आफूले चाहेको सहि हुन सक्दैन; जब हामी लमिनेट गर्छौं, सामग्रीहरू सधैं झुम्मिन्छन्; जब हामी काट्छौं, झोलाहरू सँधै स्क्यू हुन्छन्। , तर हामीले कहिल्यै हार मानेन र अन्तमा हजारौं परीक्षणहरू सफल भए। अन्तमा हामी हाम्रा ग्राहकहरुका लागि उत्तम ब्यागहरू दिन सक्छौं।
२० बर्ष भन्दा बढीको विकास पछि, अब ब्यिन प्याकिंगलाई उत्पादक उद्यममा विकसित गरिएको छ जुन लचिलो प्याकेजि bags झोलाहरू विकास र उत्पादनमा विशेषज्ञ छ। उत्पादन क्षमता प्रत्येक वर्ष million करोड RMB मा पुग्न सक्छ; Sets० कार्यशालाहरू sets० सेट उद्योग अग्रणी उपकरणहरू स्थापना गरिएको छ। जस्तै: color र color्ग प्रिन्टि machinery मेशिनरी, उच्च-स्पीड टुकडेरो मेशिनरी र फिल्म कभर गर्ने मेशिनरी, डिभिडिंग र काटि machinery मशिनरी, ओभन मेशिनरी र अन्य झोला बनाउने मेशिन। यी अग्रिम उत्पादन लाइनहरूको लागि धन्यवाद, हामी ग्राहकहरूलाई विभिन्न सामग्री, डिजाइन र प्रिन्टिंग आवश्यकता पूरा गर्न सक्दछौं।
बेयिन प्याकि inमा १०० भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन्, जसमध्ये 50० जना प्राविधिक टेक्निशियनहरू छन् जुन मुद्रण अभ्यास प्रमाणीकरणको साथ योग्य छन्, १० वरिष्ठ प्राविधिकले १० वर्षको लागि प्याकेजिंग उद्योग लिइसकेका छन्। धनी अनुभवी कामदारहरूले सबै ग्राहकहरूको मागहरूलाई पूर्णरूपले पूरा गर्छन्।
यसबाहेक, त्यहाँ y० भन्दा बढी उत्कृष्ट बिक्रीहरू बेइन प्याकि inमा छन्, जसले ग्राहकहरूलाई उनीहरूको समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्दछ। ग्राहकको सन्तुष्टि हाम्रो खोज हो। हामी ग्राहकहरूको डिजाइन, उत्पादन र शिपिंग, आदि मा मद्दत गर्दछौं।
हामी वचन दिन्छौं कि हामी day० मिनेट दिन भित्र र रातको 8 घण्टा भित्र जवाफ दिनेछौं। हामी समस्याहरूको समाधान गर्न मद्दत गर्न इच्छुक छौं, तपाईले आदेश दिनुहुने छैन वा अन्तमा कुनै फरक पर्दैन। २० बर्ष भन्दा बढि, त्यहाँ विरलै ग्राहकहरु हामी बारे गुनासो छन्, र हामी तपाईंलाई हामी कहिल्यै छनौट गर्न अफसोस गर्न सक्नुहुन्छ वचन दिन सक्छौं।
काजुओ Beyin कागज र प्लास्टिक प्याकिंग कं, लिमिटेड
हाम्रो कम्पनी बायोडेग्रेडेबल ब्यागको अनुसन्धानमा प्रतिबद्ध छ
Beyin प्याकिंग अब पहिले नै एक परिपक्व र स्थिर उद्यम हो, हामी कहिले पनि बिर्सँदैनौं कि हामी कसरी हाम्रो समाज र ग्राहकहरूको समर्थनको कारण कसरी यति छिटो हुर्कन सक्छौं। हामी समुदायलाई फिर्ता दिन यथाशक्य कोशिश गर्नेछौं।
हामीले पृथ्वीमा प्लास्टिकको फोहोर घटाउने आशामा बायोडिग्रेडेबल ब्यागहरूको बारेमा अनुसन्धानमा आफूलाई समर्पण गर्यौं। हामीले धेरै वर्षसम्म प्रयास ग .्यौं, र अन्तमा हामीले युके कम्पनी वेल्सको मास्टरब्याच भेट्टायौं जसलाई कच्चा मालमा थप्न सकिन्छ जस्तै पीई, बीओपीपी, पीईटी, इत्यादि, टुक्रा टुक्रा ब्यागलाई बायोडिग्रेडेबल बनाउन। हामी अधिक मानिसहरूलाई यो सामग्रीको आम प्लास्टिकको लागतको सट्टामा यस सामग्रीलाई थाहा दिन र प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछौं, किनभने हामी आशा गर्छौं कि हामी आफ्नो वातावरणको सौन्दर्य राख्न र सम्झन सक्छौं।
यसका साथै हामी सार्वजनिक कल्याणका लागि इच्छुक छौं। हामी धेरै चोटि जिराकोमियममा गयौं, जहाँ धेरै एक्लो वृद्ध मानिस बस्छन्। हामी विश्वास गर्छौं कि, एक राम्रो समाजले पुरानो कसैमाथि निर्भर हुन दिनु पर्छ, र हामी आफ्नो अंश लिन इच्छुक छौं।
Beyin प्याकिंग एक योग्य, जिम्मेदार र महान हृदय कम्पनी हो। हामी दिगो विकास, ग्राहकहरुको सन्तुष्टि दिमागमा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं, र कर्मचारीहरूको खुशीको ख्याल राख्छौं।
थप पत्ता लगाउन तयार हुनुहुन्छ? आज सुरु गर्नुहोस्!
हामी किन कहिल्यै बिर्सदैनौं किन हामी सुरु गर्छौं, ताकि हामी जान्छौं हामी कहाँ जान्छौं!